★မြန်မာ့အလင်း★: Swedenကိုသင်ခန်းစားယူပြီး အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်ဖြစ်ပါစေ
Sweden နိုင်ငံသည် မွတ်ဆလင်တို့၏ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါပြီ။ မြန်မာအချင်းချင်း နအဖ၊ ဒီမို၊ ကရင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ ပအို့၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ မွန်ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး ရန်ဖြစ်ရမယ့် အချိန် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကုလားတွေက ဗမာမ၊ ကရင်မ၊ ကယားမ၊ ရှမ်းမ၊ တရုတ်မ၊ မွန်မဆိုတာကို မခွဲခြားပါဘူး။ မြန်မာမိန်းခလေးတွေဆိုရင်. . . အားလုံးကို ဖျက်ဆီးမှာပါ။ အဲလိုဖျက်ဆီးတာကိုက သူတို့အတွက် မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လို့ ခံယူထားသူတွေပါ။ ပလီတွေကလဲ မိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ကုလားကို ဆုငွေပေးကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဆိုတာ အဆင့်အတန်းလုံးဝမရှိပဲ အရမ်းကို အောက်တန်းကျပါတယ်. . . သူတို့တွေဟာ မြန်မာ့မြေပေါ်မှာနေတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားတယ်… မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းကို သွေးခွဲရန်တိုက်ပေးတယ် . . .မြန်မာမိန်းခလေးတွေကို ဖျက်ဆီးတာကို ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ပြီး အရှက်မရှိကြွားနေတာ အားလုံးမြင်တွေ့နေရတာပဲ။
ကျုပ်တို့တွေ နိုင်ငံရေးအယူဝါဒကွာဟချက်ကြောင့် နအဖ၊ ဒီမို ဆိုပြီးကွဲပြားနေပါမယ်။ ဒါပေမယ့် . . မိမိရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်အတွက် မွတ်ဆလင်ကို လူရာမသွင်းပါနဲ့။ ဗမာ၊ကရင်၊ကယား၊ ရခိုင်၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ ချင်း ၊ ပလောင်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသား အစွဲတွေကြီးတွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်တို့အချင်းချင်းမသင့်မြတ်တဲ့ ကိစ္စအပေါ်မှာ ကုလားတွေ အမြတ်ထုတ်တာမခံပါနဲ့။ ဘာသာရေးအရ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူဆိုပြီး အမြင်တွေကွဲပြားနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်တွေဟာ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူတွေကို ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းတွေလုပ်ပြီး သတ်ဖြတ်နေတာ အချိန်တိုင်းပါပဲ။ မွတ်ဆလင်ဟာ ဘာသာအားလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိကြပါ။
ကျုပ်တို့တွေ ဒီအတိုင်းတော့ ဆက်သွားဦးမလား?။ မတူညီတာတွေကို မေ့ထားပြီး.. မွတ်ဆလင်အမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာ အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့် လုပ်ကိုင်ပေးစေချင်တယ်။ အဲလိုမလုပ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်၊ ဘေးထိုင်ဘုပြောလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အထက်မှာ Sweden ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကျုပ်တို့တွေ ကြုံလာနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မိမိနိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် တာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။ တာဝန်မယူပဲ ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားဆိုရင်တော့… ကျုပ်တို့တွေကို နောက်မျိုးဆက်တွေက လက်ညှိးထိုးအပြစ်ပြောတာခံရပါလိမ့်မယ်။ ကဗျာ . . . ယုတ်ညံ့တဲ့မွတ်ဆလင်ဝါဒဆိုးကြီးကို သခင်မြန်မာအားလုံး လက်တွဲပြီး အမြစ်ဖြုတ်ပါစို့။ ညီညွတ်ကြပါစို့ဗျာ။ ညီညွတ်ဖို့အတွက် ဒီမို၊နအဖ၊ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်ဆိုတဲ့ အစွဲအလန်းတွေကို ဖျောက်ပေးကြပါဗျာ။ ကျုပ်တို့ရဲ့ စကားကို လက်ခံရင်… လက်တွေ့ကျကျ တစ်ခုခုတော့လုပ်ပေးပါ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 7:32 AM
ဒီ blog ကိုရေးနေတဲ့သူကဘယ်သူလဲတော့မသိပါဘူး...အစ်ကိုရေးတာတွေကအရမ်းကိုအကျိုးရှိပါတယ်အစ်ကို...ကျနော်ကမြန်မာအမျိုးသားတစ်ယောက်ပါ...ပြီးတော့စစ်သားတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်...ကျနော်လုပ်နိုင်သလောက်...တတ်နိုင်သလောက်...မွတ်ဆလင်ဝါဒအမြစ်ဖြုတ်ရေးမှာပါဝင်ပေးပါ့မယ်အစ်ကို...ငါ့တိုင်းပြည်...ငါ့မြေပေါ်မှာ...ငါ့လူမျိုးကိုစော်ကားနေတဲ့ဒင်းတို့ကို...အမှုန့်ချေပစ်ဖို့ငါ့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်...
သူ့ကိုယ်သူ စစ်သားဆိုပြီး အမှုန့်ချေပစ်မယ်လေး ဘာလေးနဲ့... ဖင်ခေါင်းကတော့ ကမ္ဘာ့အချင်းမိုင်လောက်ကို ကျယ်နေတာပဲ... မွတ်စ်လင်မ်နိုင်ငံတွေကို လှည့်လည်ပြီး မွတ်စ်လင်မ်တွေဆီမှာ ဖင်ခံတဲ့အလုပ် မလုပ်မိအောင်တော့ ကြိုးစားဦးလေ နော့်... မွတ်စ်လင်မ်ဝါဒ အမြစ်မပြုတ်ပဲ မင်းဖင်စုတ်တာပဲ အဖက်တင်နေဦးမယ်နော်.. သတိထားဦး... ဟီးဟီးဟီး